“Nguva Yokunyarara, Nenguva Yokutaura” — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
w96 5/15 pp. 21-23
“Nguva Yokunyarara, Nenguva Yokutaura”
Nharireyomurindi Yokuzivisa Umambo hwaJehovah—1996
Nzira Dzokupingudza Nadzo Rurimi
Kudzora Rurimi Apo Tinenge Takatsamwa
Apo Kunyarara Kunenge Kusiri Mhinduro
“Nguva Yokutaura” Pamusoro poUmambo hwaMwari
Shandisa Rurimi Rwako Zvakanaka
Nharireyomurindi Yokuzivisa Umambo hwaJehovha—2015
KANGANI kawakademba kuti, “Ndinoshuva kuti dai ndanga ndisina kutaura izvozvo”? Bva, ungayeuka dzimwe nhambo apo wakakundikana kutaura noushingi. Uchirangarira nguva yakapfuura, ungava wakafunga kuti, ‘Ndinoshuva kuti kudai ndataura chimwe chinhu.’
Bhaibheri rinotaura kuti pane “nguva yokunyarara, nenguva yokutaura.” (Muparidzi 3:7) Hepano, ipapoka, pane chinetso—kusarudza nguva yokutaura uye nguva yokuramba wakanyarara. Unhu hwedu husina kukwana kazhinji kazhinji hunotisunda kuita uye kutaura zvinhu panguva isina kururama. (VaRoma 7:19) Tinogona sei kudzora rurimi rwedu rwusingadzoreki?—Jakobho 3:2.
Kutibetsera kusarudza kuti nguva yokutaura uye nguva yokuramba takanyarara, hatisati tichida ndaza refu yakagadzirirwa kufukidza mamiriro ezvinhu ari ose anobvira. Panzvimbo pezvo, tinofanira kutungamirirwa nemavara ayo ari rutivi rwomuzvarirwo rwounhu hwechiKristu. Ndeapi ari mavara iwaya?
Jesu Kristu akatsanangura kuti rudo ndiro vara guru raisunda vadzidzi vake. “Vose vachaziva naizvozvi kuti muri vadzidzi vangu, kana mune rudo pakati penyu,” iye akadaro. (Johane 13:35) Kana tikaratidzira zvikuru rudo rwouhama rwakadaro, tichadzora rurimi rwedu zviri nani.
Mavara maviri anowirirana achatibetserawo zvikuru. Rimwe raiwawa kuzvininipisa. Kunotigonesa ku‘rangarira vamwe kuva vakuru kwatiri timene.’ (VaFiripi 2:3) Rimwe racho unyoro, uhwo hunotichengeta tichi“tsungirira pakuitirwa zvakaipa.” (2 Timotio 2:24, 25) Muna Jesu Kristu tine muenzaniso wakakwana wenzira iyo aya mavara anofanira kushandiswa nayo.
Sezvo kwakaoma zvikuru kudzora rurimi rwedu apo tinenge tichidzvinyirirwa, ngatirangarirei usiku rufu rwaJesu rwusati rwasvika—nguva apo iye akanga a“ne shungu kwazvo.” (Mateo 26:37, 38) Hakushamisi kuti Jesu akanzwa neiyi nzira, sezvo ramangwana risingagumi rorudzi rwose rwomunhu raitsamira pakuramba kwake akatendeka kuna Mwari.—VaRoma 5:19-21.
Iyi zvirokwazvo yakanga iri nguva yokuti Jesu ataure kuna Baba vake vokudenga. Naizvozvo iye akaenda kunonyengetera, achikumbira vatatu vavadzidzi vake kuramba vakarinda. Pashure penguva yakati iye akauya ndokuvawana vakavata. Pana ikoko iye akati kuna Petro: “Makanga musingagoni seiko kurinda neni nguva imwe chete?” Iyi tsiuro yorudo yakaperekedzwa namashoko akaratidza nzwisiso youtera hwavo. Iye akati: “Mweya unoda hawo, asi nyama haina simba.” Gare gare, Jesu akauya zvakare ndokuwana vadzidzi vavata. Iye akataura kwavari nenzira yomutsa uye “akavasiya . . . akandonyengetera rwechitatu.”—Mateo 26:36-44.
Apo Jesu akawana vadzidzi vakavata rwechitatu, iye haana kuva nehasha asi akati: “Chivatai henyu, muzorore; tarirai, nguva yasvika, Mwanakomana womunhu woiswa mumaoko avatadzi.” (Mateo 26:45) Munhu bedzi ane mwoyo wakazara norudo, ane chimiro chendangariro chinyoro uye chokuzvininipisa zvirokwazvo, aigona kuva akashandisa rurimi munzira yakadaro panguva yakaoma kudaro.—Mateo 11:29; Johane 13:1.
Nokukurumidza pashure pacho, Jesu akasungwa ndokutongwa. Pano tinodzidza kuti padzimwe nguva kwakanakisisa kuramba takanyarara, kunyange apo tinenge takabatikana muushumiri hwedu hwechiKristu. Vavariro iri pakutsvagira Jesu mhaka, vaprista vakuru vakanga vasingatongofariri kudzidza zvokwadi. Naizvozvo muaya mamiriro ezvinhu asina kuterama, Jesu akaramba akanyarara.—Enzanisa naMateo 7:6.
Jesu haana kuramba akanyarara, zvisinei, apo muprista mukuru akarayira, kuti: “Ndinokupikisa naMwari mupenyu, kuti utiudze kana uri Kristu, Mwanakomana waMwari!” (Mateo 26:63) Sezvo Jesu akanga apikiswa mhiko, yakanga iri nguva yokuti ataure. Naizvozvo iye akapindura, kuti: “Ndizvo zvawataura, asi ndinoti kwamuri: Kubva zvino muchaona Mwanakomana womunhu agere kurudyi rwesimba, achiuya mumakore okudenga.”—Mateo 26:64.
Mukati mezuva iroro rinokosha, Jesu akadzora rurimi rwake zvakakwana. Muchiitiko chake, rudo, unyoro, uye kuzvininipisa akanga ari mativi omuzvarirwo ounhu hwake. Tinogona sei kushandisa aya mavara kudzora rurimi rwedu apo tinenge tichidzvinyirirwa?
Apo tinotsamwa, kazhinji kazhinji tinokundikana kudzora rurimi rwedu. Somuenzaniso, Pauro naBharnabhasi pane imwe nguva vakanga vane murangariro wakasiyana. “Zvino Barnabhasi wakanga achida kutora Johanewo, wainzi Marko, asi Pauro wakati hazvina kunaka kumutora iye, wakambovasiya paPamfiria, akasaenda navo kubasa. Ipapo kutsamwirana kukavapo, nokudaro vakaparadzana.”—Mabasa 15:37-39.
Michael,* uyo kwamakore akati ashanda pamabasa okuvaka, anorondedzera, kuti: “Pakanga pane munhu panzvimbo yokuvaka wandaiziva zvikuru uye wandairemekedza. Asi iye akaratidzika kuva aiwanira mhaka basa rangu nguva dzose. Ndakarwadziwa uye ndakashatirwa asi ndakachengeta kunzwa kwangu mukati mangu ndimene. Rimwe zuva zvinhu zvakaoma apo iye akatsoropodza basa randakanga ndichangobva kuita.
“Ndakataura mirangariro yangu yose yakanga yakadzvinyirirwa. Nemhaka yokushatirwa, handina kutongofunga nezvomurangariro wakaipa unofanira kuva wakaparirwa pane vose vaivapo. Kworutivi rwose rwakanga rwasara rwezuva, ndakanga ndisingadi kutaura kwaari kana kuti kunyange kumuona. Zvino ndinoziva kuti handina kubata chinetso chacho nenzira yakafanira. Kwaizova nani zvikuru kunyarara ndokuzotaura pandakanga ndadzikama.”
Nenzira inofadza, rudo rwechiKristu rwakasunda ava vanhu vaviri kupedza mitsauko yavo. Michael anotsanangura, kuti: “Pashure pekurukurirano yakati yakajeka, takanzwisisana zviri nani, uye zvino tine ushamwari hwakasimba.”
Seizvo Michael akadzidza, kana tikazviwana timene tatsamwa, pane dzimwe nguva kuchenjera kuramba takanyarara. “Une mweya wakagadzikana, munhu wenjere,” inodaro Zvirevo 17:27. Nzwisiso norudo rwouhama zvichatibetsera kudzora sundwo yedu yokutaura zvinorwadza. Kana tagumburwa, ngatitaurei kune mumwe munhu wacho tiri toga mumudzimu munyoro uye wokuzvininipisa, nomurangariro wokudzorera rugare. Zvakadiniko kana kufufutirwa nehasha kwatoitika? Ipapo rudo ruchatisunda kusaratidza rudado rwedu ndokutsvaka nokuzvininipisa kuyanana. Ino ndiyo nguva yokutaura, kuratidza kuzvidemba uye kurapa mirangariro yakarwadziwa kupfurikidza nekurukurirano yapachokwadi.—Mateo 5:23, 24.
Hasha kana kuti kutsamwa kungagona kutisakisa kurega kutaura nomunhu anotishatirisa. Ikoku kunogona kuva kunokuvadza zvikuru. “Mukati megore rokutanga reroorano yedu, makanga mune nhambo apo ndaisataura kumurume wangu kwamazuva anoverengeka panguva yakati,” anobvuma kudaro María.* “Kazhinji kazhinji, kwakanga kusiri nemhaka yezvinetso zvikuru asi, panzvimbo pezvo, nemhaka yokuungana kwokushatirwa kuduku. Ndakaramba ndichifungisisa pamusoro pokushatiriswa kwose ikoku kutozosvikira kwava mhinganidzo yakaita segomo. Ipapo yakasvika nguva apo ndakanga ndisingachagoni kuzvitsungirira, uye ndakangorega kutaura kumurume wangu kutozosvikira kukangaidzwa kwangu kwazopfuura.”
María anowedzera, kuti: “Rugwaro rwakati rweBhaibheri—‘zuva ngarirege kuvira makatsamwa’—rwakandibetsera kugadziridza kufunga kwangu. Murume wangu neni takashanda nesimba pakuvandudza kurukurirano kuti zvinetso zvirege kuungana. Kwave kusiri nyore, asi pashure pemakore gumi oupenyu hwokuroorana, ndinofara kutaura kuti idzi nhambo dzorunyararo rwokusaitira hanya dzava shoma zvikuru. Zvisinei, ndinofanira kubvuma kuti ndichiri kushanda kuti ndidzore ichi chimiro chendangariro.”—VaEfeso 4:26.
Seizvo María akawana, apo nyanduko dzinovapo pakati pavanhu vaviri, kuputsika kwekurukurirano hakusi mhinduro. Mumamiriro iwawo ezvinhu, pfundepfunde sezvingabvira ingakura, uye ukama hwacho hungakuvadzwa. Jesu akataura kuti tinofanira ku‘kurumidza kupedza nhau.’ (Mateo 5:25) “Shoko rinotaurwa nenguva yakafanira” rinogona kutibetsera ku‘ronda rugare.’—Zvirevo 25:11; 1 Petro 3:11.
Tinofanirawo kutaura apo tinenge tichida betsero. Kana tiri kutambura nemhaka yechinetso chakati chomudzimu, tinganzwa tichizengurira kuremedza vamwe. Asi kana tikaramba takanyarara, chinetso chacho chingava chakaipa zvikuru. Vakuru vakagadzwa vechiKristu vanotiitira hanya uye, kana tikavabvumira, nenzira isingapanikirwi ivo vanodisa kubetsera. Iyi inguva apo tinofanira kutaura.—Jakobho 5:13-16.
Kupfuura zvose, tinofanira kutaura kuna Jehovha nguva dzose mumunyengetero womwoyo wose, seizvo Jesu akaita. Zvirokwazvo, ngati‘dururire mwoyo wedu’ kuna Baba vedu vokudenga.—Pisarema 62:8; enzanisa naVaHebheru 5:7.
Ushumiri hwechiKristu ibasa roumwari iro rinofanira kuitwa mugumo usati wasvika. Sezvisakamboitika nakare kose, naizvozvo kwakakosha kuti vabatiri vaJehovha vazivise mashoko akanaka oUmambo. (Marko 13:10) Kufanana navaapostora, vaKristu vechokwadi ‘havatongogoni kurega kutaura pamusoro pezvinhu zvavakaona nezvavakanzwa.’—Mabasa 4:20.
Chokwadika, haasi munhu ari wose anoda kunzwa mashoko akanaka. Kutaura idi, pakutuma vadzidzi vake kunoparidza, Jesu akavapa zano roku‘tsvaka avo vakanga vachifanirwa.’ Sezvo Jehovha asingatongomanikidzi munhu upi noupi kumunamata, hatingapfuuriri nenzira yokusindimara kutaura kumunhu uyo anoramba zvakasimba shoko roUmambo. (Mateo 10:11-14) Asi tinofara kutaura pamusoro poumambo hwaJehovha kuavo vaka“tarirwa upenyu husingaperi.”—Mabasa 13:48; Pisarema 145:10-13.
Rudo, unyoro, uye kuzvininipisa mavara anogona kutibetsera kudzora chimiro chedu chendangariro chisina kukwana chokutaura nokukurumidza kana kuti kuwira murunyararo rwakakomba. Sezvo tinokura muaya mavara, tichava takashongedzerwa zviri nani kutsauranisa pakati penguva yakakodzera neisina kukodzera yokutaura.
Harisi zita rake chairoiro.
[Mufananidzo uri papeji 23]
Zvinetso zvinogona kupedzwa kupfurikidza nekurukurirano yakanaka